PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-01 - SIVULA AMEHLO ABACULI:
namanje uthisha umagidigidi Sambo.
Usolwazi Khabi Mkhoma ongasekho wabe efundisa lolu hlobo lomculo enyuvesi yasezululand, ongoye, enosakabhudu lwezingane owayezifundisa ukusika ivayolina nezinye izimfijoli.
Asikhohliwe futhi yizihlabani zalo mculo, ababhidi beminyaka ye-1970 ongasekho u-umnu Abel Zitha, nodokotela Griffith Khanyile osaphila- bobabili babevale ngehlahla empangeni, enyakatho yekwazulu-natal, umnu Zitha efundisa ekhombindlela High School, udo-kotela Khanyile efundisa ema-ngwe High School.
Kwakucishe kuliwe uma amajaji ewinise elinye lalawa makwaya ngoba ayeshiyana ngamamaki amancane, zibulalana ngengoma.
Emlazi, imenzi High School, yabe isaphethwe yinkakha umnu Moses Masondo, izwelibanzi High School iphethwe ngumnu Bheki Mthabela, bese ziba khona nezinye kodwa ezabe zibhekana ngeziqu zamehlo kwakuba yizo lezi zombili.
Sizibuza umbuzo othi sebeshonephi abathandi balo mculo - ngabe bonke sebethathwe yigqomu? Baphi omnu Mongi Mzobe wa- Kwashaka High emlazi sibala esizaziyo, nawe uyazazi ezangakini izikole ezabe zivutha amalangabi kepha manje sezilothile. Aphi amakwaya omphakathi? Akukhwezelwe izinkuni uphinde uvuthe lomlilo .
Sithi iclermont Choir ngoba isiwuqalile umkhankaso wokubuyisa isithunzi salo mculo futhi sizwile ukuthi ithweswe umsebenzi wokuba kube yiyo ehlanganisa ababhidi siyifisela inhlanhla nempumelelo.
Abanye bazobuza ukuthi yini lena edikibalisa amakwaya ukuba acule lolu hlobo lomculo, sizobala izizathu ezimbalwa ezaziwayo:
Imali ingenye yezizathu. Kuyizindleko ukuhlanganisa abaculi abangaphezu kwa-20 nsukuzonke futhi awavamisile ukukhokhelwa imali ebhekile amakwaya.
Awuthengwa umculo wamakwaya ezitolo. Alikho ikwaya esake sezwa kuleli ukuthi lidayise igolide (15 000 amakhophi).
Esikhathini esiningi abaculi bazikhokhela bona izindleko.
Uma kwenzekile bathola imadlana bahola kancane ngoba baningi.
Ukungaphathwa kahle kwezimali ngesinye sizizathu esenza ahlakazeke amakwaya.
Imvamisa amakwaya aculelwa ngabantu asebenemizi yabo nezinkinga zakwabo zisuke zithe bhe.
Abanye badikibaliswa wukuthi kahlale kuwina ikwaya eyodwa ngasosonke isikhathi badube bashiye phansi.
Ziningi izizathu kepha kuzomele abathweswe umsebenzi wokuhlanganisa lolu hlobo lomculo bangazikhohlwa lezi esesizibalile, yizo ezihamba phambili.